Aqoonkaab Maxamuud Cabaas Hogaamiyaha Falastiiniyiinta. | Aqoonkaab
Maxamuud Cabaas Hogaamiyaha Falastiiniyiinta.
Jul 01, 2016Arrimaha bulshada
Akhristayaasha sharafta badan ee shabakada aqoonkaab wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee Taariikhda dadka dunida ugu caansan qarnigii 21aad gaar ahaan waxaynu dhexmushaaxaynaa qeybta siyaasiyiinta maanta iyo barnaamijkeenan waxaynu kaga hadli doonaa taarikhda Hogaamiyaha falastiiniyiinta maxamud cabaas oo ku jira liiska dadkan samamaynta badan Qarigan 21aad.
Mahmoud Abbas waxaa loo codeeyey inuu noqdo madaxweynaha qaranka falastiin 2005. wuxu hogaaminaayey dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee fatax. sido kale wuxuu noqday raisal-wasaarihii ugu horeeyey ee falastiin. Cabaas wuxuu inta badan shaqadiisa ku qaatay wadahdalka israail si uu nabad unoqdo gayiga falastiin. waxay u arkayeen reer galbeedku inuu yahay dhexdhexaad kasoo ka dhalin kara nabad waarta gobolka.
Cabaas wuxuu dhashey 1935 falastiin. qoyskiisu wuxuu noqday qaxoonti xiligii 1948 dagaalkii udhexeeyey Israail iyo suuriya .wuxuu ka qalinjabiyey jaamacadda dimishiq sido kale wuxuu ka bartay sharciga wadanka masar.
intaa kadib wuxuu usocdaalay Moosko si uu ugu diyaariyo shahaadada sare ee PH.d.
1950, cabaas wuxuu horumarin ka sameeyey siyaasada falastiin. Isagoo ku biiray ururkii xoriyad doonka ee falastiiniyiinta.
wuxu ka mid ahaa dadka dhidibada utaagay ururka fatax sanadkii 1957. Bilow ilaa dhamaad sanadkii 1960,1970,1980 wuuxu sii ahaa shakhsi ka dhex muuqda siyaasada falastiin. Cabaas wuxuu lahaa cod dheer uu kaga doodi jiray aqoonsashada israil. wuxuu kulama qarsoodi ah la qaatay kooxo israilyiin ah ilaa 1970.
Sanadkii 1993 cabaas wuxuu qayb kamid ah saxeexay heshiiskii nabada falastiin iyo israail. waxay u arkayeen israil iyo maraykan ku inuu yahy qof lala shaqayn karo.
wuxu ku guulaystay doorashadii madaxwaynanimo 2005 waxaana loogu yeedhay inay tahay dhamaadka rabshadaha israil iyo falastiin. wuxuu si aan daal lahayn uga shaqeeyey inay falastiin hesho dawlad iyo gobol madax banaan sido kale wuxuu yiri ”Ma jirto wax lagu badasho wadahadal”
Waxaa diyaariyey: Bilaal Axmed Cige (Tixraac)
Previous PostJuxa iyo sheeko aad u qosol badan. Next PostFaa’iidooyinka Malabka Iyo Cudurro Badan Oo Layskaga Daaweeyo Malabka